1. Vanhu vazhinji vari kutsvaga chakavanzika chechimiro chakakwana. Nechigaro cheushe chehudiki Nekuwana mune yakanaka chimiro nemaitiro ekurasikirwa nedumbu mafuta. Izvo mukuwedzera pakudzosera vechidiki kumashure Wedzera bonde nekupfeka mbatya dzakaringana mumhando dzese. Zvakare zvinoteverwa nehutano hwakanaka Izvo hapana munhu anogona kutipa kunze kwedu pachedu Nhasi tine nhanho yakapusa, asi zvinoda moyo murefu uye kurangwa. Ukaipfuura, iwe uchavimbiswa kuti yako yakanaka chimiro ichadzoka zvechokwadi.
2. Inwa girazi hombe remvura yakachena usati wadya. Iyi nzira, pamusoro pekuita kuti ganda rako rive rakanaka Excretory system Zvakare zvinotibatsira kuzadza zvisingatendeseke nekukurumidza Nekuti mvura chikamu chakakosha chemuviri Inozorodza mukati mezuva Uye kunwa mvura 5 - 10 maminetsi usati wadya kudya kwese. Zvakare zvinoita kuti isu tinwe nekukurumidza zvakanyanya Nekuti mvura yakaendeswa mupani nekuda kwechikafu chekutanga Asi ndinofanira kuzviita tsika nguva dzose. Maona kana kwete? Hazvina kuoma
3. Sarudza kudya Zvinonzwisisika zvinobatsira Kana dumbu ratanga kuuya Zvinotaridza kuti chikafu chedu mukusarudza chikafu chakanyanya kuregeredzwa, handiti? Zvakanaka, gara uchitanga patsva. Nesarudzo dzakangwara dzechikafu, izvo zvakakosha kune dumbu mafuta kurasikirwa nzira Chinhu chekutanga kurega zvinwiwa. Yakakwirira-shuga mashuga Idya zvishoma zvine starchy chikafu. Kana shandura kune hupfu hunobatsira hwakadai sezviyo zvakakwana Kana chingwa, gorosi chingwa zvine mwero pakudya kumwe nekumwe Kana iri mupunga, saka ndiro imwe pakudya kumwe nekumwe. Wedzera mapuroteni chikafu chakakosha kugadzirisa nzvimbo dzakakuvadzwa. Uye chikafu chine fiber yakawanda Usakanganwa kuti kudya kunoshanda kumuviri wako. Iyo inogara iri yakavimbika quote. Ngatisarudzei kuti tiwane chimwe chinhu chinobatsira mumuviri kubva nhasi zvirinani.
4. Sarudza chiitiko chekurovedza muviri chaunofarira uye chiite nguva dzose, uye mazana evanhu haafarire kuita zvakafanana. Saka ini handidi kutarisisa pane izvo Inofanirwa kuve chero kurovedza muviri kana rudzii rwechiitwa, chingokumbira kuti iko iko iko kurovedzwa kwatinofarira. Uye zviite nguva dzose, mazuva 3-5 pavhiki, zvinoenderana nezviri nyore Asi unofanirwa kuita zvinoteedzana kweanopfuura maminitsi makumi matatu kusvika paawa rimwe zvichienderana nezera uye kugwinya kwemuviri Vamwe vanhu vanofarira kufamba, kumhanya, yoga, kutamba, kuchovha bhasikoro, kushambira, cardio, nezvimwewo ndinoti kana vachizviita nguva dzose. Uye pamwe nemamwe maitiro Nezve maitiro ekudzora dumbu mafuta Pasina kukurumidza Mafuta edumbu anodzikiswa zvishoma nezvishoma, achiteverwa noutano Uye kupenya sezviri pachena
5. Iva netariro Deredza kushushikana Nguva dzose wedzera simba rako rakanaka uye EQ. Ichi ndicho chinhu chakaomesesa kuita. Mukuedza kudzora pfungwa, manzwiro, kana kushungurudzika Chero bedzi tiri vanhu uye tiri vapenyu Asi edza kunzwisisa zvinhu Munyika iyo hapana chine chokwadi Mufaro waive nesu munguva pfupi. Kutambura kunouya uye kuchakurumidza kupfuura. Dambudziko rega rine mhinduro, ingo ziva. Uye munguva yekuzorora Zvipe simba rakanaka Siya mutoro kwenguva pfupi uye tarisa pakutarisira muviri wako kutanga. Usarega kushungurudzika kuchitikuvadza. Kunyanya kunetseka paunowedzera kudya Izvo zvakanyanya kushushikana, zvakanyanya kushushikana Kunyanya kukosha, kushushikana kuri Muvengi noutano hwedu munzira dzese
6. Zvakareruka, zvisina kuoma zvachose, kutaura zvazviri, kuzvitarisira. Nekusvika pakuzvida iwe nekupa zvakanaka zvinhu kwauri zvakare Asi zvinoda kugara uchidzidzira Nekuti hutano hwakanaka hausi kutengeswa Kana iwe uchida, iwe unofanirwa kuzviita iwe pachako.